ငါ PWM တုန်ခါမှုတွေအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ကဘာလဲ? - Iris က💡💻 - မျက်လုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်အပြာရောင်အလင်း Filter ကို🛌👀
ငါ PWM တုန်ခါမှုတွေအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ကဘာလဲ?
PWM တုန်ခါမှုတွေနှင့် ပတ်သက်. ဘုံမေးခွန်းများကိုအကြောင်းကိုတစ်ဦးကမြန်မြန်ဆန်ဆန်မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ, တခါတရံသူကထွက်အဲဒီမှာအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုနှင့်အတူရှုတ်ထွေးစေခြင်းငှါဖြစ်သောကြောင့်.
သင်၏မေးခွန်းဖြေကြားခြင်းမရှိပါနဲ့ကျွန်မထဲကထူးလေ၏, ဒီမှာအဖြေကို add ပါလိမ့်မယ်ဆိုပါကတစ်နေရာရာမှာငါ့ကိုရေးထား🙂
ဟုတ်ကဲ့အချိန်အများစုမှာ. ဒါဟာသင့်ရဲ့မော်နီတာ PWM သို့မဟုတ် DC ကအလင်းမှိန်ခြင်းကိုအသုံးပြုသည်ရှိမရှိပေါ်တွင်မူတည်သည်.
အခြေခံအားဖြင့်ယင်းအပေါ်နောက်ခံအလင်းနှင့် OFF ပေါ်တွင် LED ကိုလှည့်.
တဖန်သင်တို့မျက်စိ strain နှင့်မျက်စိနာကျင်ကိုက်ခဲရ.
ဒီ fix လုပ်နည်း?
သင့်ရဲ့မော်နီတာဟာ့ဒ်ဝဲတောက်ပဖို့ Set 100% သင့်ရဲ့မော်နီတာခလုတ်သုံးပြီး.
အများစုမှာမော်နီတာအများဆုံးရောင်ခြည်မှာ PWM မသုံးပါ.
သင့်ရဲ့မော်နီတာ PWM သုံးနိုင်ပါသည်
သင့်ရဲ့မော်နီတာဖြစ်ကောင်း PWM အသုံးပြုနေခြင်းမရှိပါနဲ့သင်ဤ ON နှင့် OFF အရာနှင့်မျက်စိ strain မရကြဘူး.
မဟုတျပါဘူး 100% အရောင်အဝါကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့?
အကောင်းဆုံးမျက်စိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်မျက်စိ strain နှင့်မျက်စိနာကျင်မှုအနည်းဆုံးငွေပမာဏများအတွက်, သင့်ရဲ့ Monitor ကိုအခန်းထဲမှာတစ်ဦးအလင်းအရင်းအမြစ်ကိုကြည့်မနေသင့်.
နှင့်အတူ 50% အရောင်အဝါ, ကျွန်မ ပို. ပင်မျက်စိနာကျင်ကိုက်ခဲရစေခြင်းငှါ?
ဟုတ်ကဲ့, သင့်ရဲ့မော်နီတာ PWM ကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါက.
Iris က PWM သုံးပြီးမရှိဘဲမော်နီတာ၏အရောင်အဝါကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်.
အခန်းထဲမှာမီးပေါ်မှာရှိသမျှအချိန်ကို Turn နှင့်အမြင့်ဆုံးတောက်ပမှာပါသင့် Monitor ကိုအသုံး.
သငျသညျတုန်ခါမှုတွေ-အခမဲ့ဖြစ်သည့်အချို့သောသစ်ကိုမော်နီတာဝယ်ဖို့သို့မဟုတ် Iris ကအသုံးပွုနိုငျ.
ဒါနဲ့အများဆုံးရောင်ခြည်မှာ Iris ကအသုံးပွုသငျ့?
အဘယ်သူမျှမ, Iris ကတောက်ပကျန်းမာသည်နှင့် PWM မသုံးပါဘူး.
သငျသညျ Iris ကအားဖြင့်သင်တို့ကိုလိုခငျြသမြှကိုတနျဖိုးကိုသုံးနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ခလုတ်ကနေသင့်ရဲ့မော်နီတာဟာ့ဒ်ဝဲရောင်ခြည်မှာဖြစ်သည်ကောင်း 100%.
အကောင်းဆုံးကတော့, သင့်ရဲ့အခန်းတစ်ခန်းအလင်းရောင်မှ Iris ကအတူတောက်ပကိုက်ညီ.
Iris ကသတ်မှတ်လျှင်ဒါနဲ့မျက်စိနာကျင်မှုမရကြလိမ့်မည် 50% အရောင်အဝါ?
Iris ကသတ်မှတ်လျှင်ကျွန်မမျက်စိနာကျင်ကိုက်ခဲရလိမ့်မယ် 40% အရောင်အဝါ?
သင့်ရဲ့အခန်းတစ်ခန်းကယ့်ကိုတောက်ပတဲ့ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင့် Monitor ဟာတောက်ပမှောင်မိုက်သည်ဆိုပါကသင်ကမျက်စိနာကျင်ကိုက်ခဲရစေခြင်းငှါ.
အရောင်အဝါဟုသတ်မှတ်လျှင် 150% Iris ကထဲကနေငါလျော့နည်းတုန်ခါမှုတွေရလိမ့်မယ်?
Iris ကဟာ့ဒ်ဝဲမပြောင်းနိုင်ပါပေမယ့်အရောင်အဝါကိုထိန်းချုပ်ထားသည့်အခါ PWM တုန်ခါမှုတွေကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်.
နောက်ခံအလင်း Hz နိမ့်ဖြစ်တဲ့အခါပိုပြီးမျက်စိ strain လည်းမရှိ?
ဟုတ်ကဲ့, သငျသညျအပျေါနှင့်ပိုပြီး OFF နှင့်သင့်မျက်စိကန်ထရိုက်တို့အကြားပိုကြီးလပ်ချိန်ရှိ.
အများအားဖြင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့ LED နှင့်အတူမဖြစ်နိုင်ပါသို့မဟုတ်နှင့်အတူအမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှ Hz နှုန်းကို LED သောအဆက်မပြတ်အလင်းအဆင့်အထိရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
အောက်ပိုင်း Hz နှုန်းကိုလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်နှင့် OFF အခန်းထဲမှာမှမီးသီးလှည့်နှင့်တူ၏.
အဘယ်သူမျှမတုန်ခါမှုတွေဖြစ်ပါတယ်0Hz အကြိမ်ရေ?
အဘယ်သူမျှမ, ကြှနျုပျတို့သညျဤ ON နှင့် OFF တုန်ခါမှုတွေကိုပဌနာ.
အများအားဖြင့်, မော်နီတာထဲမှာ, သငျသညျနိမ့်ဆုံးမျက်စိ strain များအတွက်အကြီးမားဆုံးဖြစ်နိုင်သော Hz အဘို့ကြိုးစားကြသည်.
E-မှင်အတွက်, သင်မှာ .... ရှိသည်0Hz ကြိမ်နှုန်းပေမယ့်နည်းပညာကိုကွဲပြားခြားနားသည်.
0 Hz အဘယ်သူမျှမတုန်ခါမှုတွေဖြစ်ပြီးသင်မူကားမည်သည့်အလင်းရင်းမြစ်နှင့်အတူဤအရာရှိသည်မဟုတ်နိုင်ပါတယ်.
သငျသညျရနိုင်0စာအုပ်တစ်အုပ်သို့မဟုတ်တစ်ရော့ခ်နဲ့တူအချို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုကနေ Hz.
အဆိုပါမော်နီတာခလုတ်ကနေ MAX ရန်သင့် Monitor ဟာဟာ့ဒ်ဝဲရောင်ခြည် Set နှင့်အရောင်အဝါကိုထိန်းချုပ်ရန် Iris ကကိုသုံးပါ.
အားလုံးမော်နီတာအသုံးပြုမှု PWM သလား?
အဘယ်သူမျှမ, ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကအများကြီး, အခြားမော်နီတာ DC ကအလင်းမှိန်ခြင်း ဟူ. ခေါ်ဝေါ်တစ်ခုခုကိုသုံးပါ.
အဲဒီအစားဤကဲ့သို့သောရောင်ခြည်ကိုထိန်းချုပ်ရန်အတိုအားလပ်ချိန်ကို အသုံးပြု. ၏
သင်ဤကဲ့သို့သော, DC ကိုပြောင်းလဲ
ဒီတော့ DC ကအလင်းမှိန်ခြင်းတုန်ခါမှုတွေမပါဘူး?
ကောင်းစွာ, ရှိသည် subpixel အနည်းတုန်ခါမှုတွေ လူအပေါင်းတို့သည်အခြားပစ္စည်းပစ္စယမျိုးပေမယ့်အရောင်ကိုထိန်းချုပ်ရန် PWM မသုံးပါဘူး.
DC ကအလင်းမှိန်ခြင်း PWM ထက် သာ. ကောင်း၏.
Iris က DC ကအလင်းမှိန်ခြင်းကဲ့သို့တူညီသောမထားပါနဲ့?
ဟုတ်ကဲ့, DC ကအလင်းမှိန်ခြင်း သာ. ကောင်း၏ဒါပေမယ့် Iris ကဆနျ့ကငျြဘနည်းနည်းပြောင်းလဲ.
သို့သျောလညျး, သငျသညျသစ်တစ်ခုမော်နီတာဘို့ပိုက်ဆံတွေအများကြီးသုံးဖြုန်းခြင်းနှင့်အလိုအလျောက် Iris က သာ. ကောင်း၏ချင်ချင်ကြဘူးလျှင်.
ကြိုးစား Iris က foracouple of days and see if it helps you with eye pain and sleep problems.
ဒါကြောင့်မပါလျှင်သင်နှင့်အတူအမြဲတမ်း uninstall နိုင်ပါတယ်2ကလစ်.
CEO ဖြစ်သူ Iris က Technologies က
Posted in, ဆောင်းပါးများ, PWM